‘ए मेरो हजुर २’ का जान्नुस् ३ रोचक कुरा « Ramailo छ
‘ए मेरो हजुर २’ का जान्नुस् ३ रोचक कुरा
अभिनेत्री झरना थापाको डेव्यु निर्देशन रहेको फिल्म फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ भदौ १६ गते, शुक्रबारको प्रतिक्षामा छ । अभिनेत्री झरना थापाको डेव्यु निर्देशन रहेको फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ को गीत संगीत, प्रोमो तथा नायक र नायिकाले चर्चा पाइरहेका छन् । यही प्रतिक्षित फिल्म बारे केही रोचक तथा रमाइलो कुरा गरौं ।
१. ‘ड्रिम्स’ रिलिजपछि नायिका साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाहको ‘डिमान्ड हाइ’ थियो । प्रास्ताव आएका दर्जन बढी फिल्महरुलाई साम्राज्ञीले अस्विकार गरिरहेकी थिइन् । तर ‘ए मेरो हजुर २’ को स्क्रिप्ट एक पटक पढ्ने वित्तिकै साम्राज्ञीले ओके गरेकी थिइन् । साम्राज्ञीले दोश्रो फिल्ममा पनि सोलो हिरोइन हुने अवसर पाएकी थिइन् ।
२. ‘ए मेरो हजुर २’ को शिर्ष गीत सार्वजनिक भएसँगै चर्चामा छ । गीतलाई युटुवमा ७० लाख बढी पटक हेरिएको छ । तर फिल्मको शिर्ष गीतको लागि यो नै पहिलो रोजाइको गीत थिएन, संगीतकार बसन्त सापकोटाले शिर्ष गीत रेकर्ड समेत गराइसकेका थिए । तर फिल्ममा कल्याण सिंहको संगीत रहेको ‘कसम हो कसम’ बोलको गीत रह्यो । उसो त संगीतकार सापकोटाले संगीत दिएको ‘उकाली जाँदा जाँदै’ बोलको गीतले पनि चर्चा पाइरहेको छ ।
३.संगीतकार जस्तै नायक पनि सुरुमा सलिनमान बनियाँ खोजिएका थिएनन् । प्रिमियरमा ‘प्रेम गीत’ हेरेपछि निर्देशक झरना थापाले प्रदीप खड्कालाई लिने सोच बनाएकी थिइन् । तर पछि रोजाइमा सलिनमान पर्न आए । सलिन टिजर रिलिज भएसँगै चर्चामा आए । सलिनलाई ‘राइजिङ स्टार’को रुपमा हेरिएको छ । ‘ए मेरो हजुर २’ को लागि नयाँ तथा पुराना गरी झण्डै आधा दर्जन नायकलाई हेरिएको थियो भने केहीको अडिसन समेत लिइएको थियो । सलिन र साम्राज्ञीसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :